Fanangonana sonia hanatsarana ny mpamily AMD | Avy amin'ny Linux
pandev92 | | GNU / Linux, About us, Tambajotra / seriver
Betsaka amintsika no mpampiasa diso fanantenana tamin'ny mpamily lova farany 12.6 izay navotsotra noho ny karatra sary, ny olana izay nangatahanay hamahana dia tsy voavaha ary najanona ny karatray, amin'ny zavatra antsoiko, faniratsirana ny mpanjifa sy mpanjifa AMD.
Heveriko fa amin'ny maha mpampiasa AMD sy mpanjifa antsika dia mendrika fanajana bebe kokoa isika, dia mendrika ny taratasy mivalona tsara kokoa avy amin'ny orinasa, noho io antony io dia namorona ny fanangonan-tsonia napetrako eto isika, fanangonan-tsonia izay antenaiko fa maro kokoa ny olona mety hanao sonia ary rehefa mahatratra sonia 150 izahay, mikasa ny handefa AMD aho. Raha hanao sonia azy dia mandefasa mailaka fotsiny amin'ny markurujapan@gmail.com miaraka amin'ny anaranao sy ny anaranao ary ny firenena onenanao.
Manantena ny fandraisana anjara lehibe indrindra aho.
Ry tompokolahy AMD, amin'ny maha mpampiasa ny rafitra miasa GNU / Linux anao, amin'ny maha-mpampiasa birao anao, izay nandany ny volany sy nametraka ny fitokisany taminao, izay nividy karatra sary tamin'ny andiany radeon hd4000, 3000 ary 2000, tianay haseho ny tsy fahafaham-po amin'ny toe-javatra misy ankehitriny ireo mpamily cataly radeon, izay notohizana nefa tsy namboatra ny lesoka rehetra ananany ankehitriny. Amin'ny maha mpampiasa sy mpanjifa anay dia angatahana izahay hihatsara ny mpamily ho an'ny karatra graphics anay, mba hanatsarana ireo bibikely misy ankehitriny (mandroba ny playback misy output opengl, tsy misy hafainganam-pandeha gpu amin'ny chrome sy ny firefox, ny fahombiazan'ny 2d tsy mahomby, ny triatra miaraka amin'ny xvba, ny fampisehoana miadana compiz sy kwin) raikitra.
Aminao amin-kitsim-po, izaho sy ireo mpampiasa Gnu / Linux maro hafa dia manao sonia ity fanangonan-tsonia ity.
Afaka mifidy avy amin'ny Change.org ianao izao ity rohy ity amin'ny fomba azo antoka. Tohizo foana ny fanohananao ny anton'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fanangonana sonia hanatsarana ny mpamily AMD
tsotra kokoa ny mividy nvidia.
koa, ny '4 hd08xxx dia tsy tohanana intsony, raha oharina amin'ny '6 geforce 04xxx izay mbola tohanan'ny mpamily ankehitriny.
fa mbola hanatevin-daharana ny fangatahanao aho
Raha izaho manokana dia mbola tsy nanoro hevitra / nividy ny AMD / Ati mihitsy noho ny olana momba ny fanohanana, fa zavatra iray no tsy manala ny iray hafa, izany no antony tsy maintsy soniavanao, mba hananana safidy hafa hisafidianana.
Ka arakaraky ny fanohanan'ny fandraisana andraikitra no betsaka ny vintana hanatanterahany ny tanjona, amin'ny ankapobeny ny fanandramana izany dia tsy maharary ary mety hahasoa ny rehetra.
Mora tokoa ny milaza ho an'ireo manana birao, saingy vavahady ireo karatra rehetra ireo ary mangataka mpamily tsaratsara kokoa ho an'ny Linux avy amin'ny AMD izahay
Andeha hojerentsika ny fomba fiasan'ny fanangonan-tsonia, tsy misy ady ratsy noho ilay iray mbola tsy vita.
Manatevin-daharana ny fangatahanao aho, saingy tadidio fa ny fomba tsara indrindra hanehoanay ny tsy fahafaham-ponay amin'ny vokatra dia ny tsy fividianana azy ary ny fanolorana ny hafa tsy hividy azy.
Manamboninahitra AMD / ATi mihoatra ny iray no tsy maintsy nanonta ny fanangonan-tsonia tamin'ny taratasy fidiovana.
Miaraka amin'ilay mpisitrika tompony, nanana olana te hahafanta-javatra aho fa tsy miverimberina na miato amin'ny Vision E2 (HD 6320), ary ny mpamily maimaimpoana dia mampiasa angovo betsaka ary mampihena ny hafanana.
Anananao ny soniako
David Yeshael Naranjo Sanchez dia hoy izy:
Heveriko fa tonga lafatra ny zavatra arosonao, saingy tiako ny hanome anao sonia bebe kokoa satria sonia 150 tsy misy dikany
Valiny tamin'i David Yeshael Naranjo Sanchez
Na izany aza, AMD no zavatra matanjaka indrindra azonao atao izay miasa amin'ny mpamily maimaimpoana. Ary na dia manana mpamily tena tsara aza i Intel, ny fampisehoana ny chips dia tsy ampitahaina amin'ny Radeon na GeForce. Ary etsy ankilany ny fanohanana loharanom-baovao nVidia dia azo ihomehezana (tsy misy izany).
Manohana ny fandraisana andraikitra aho satria mino fa ny AMD dia akaiky kokoa ny vondrom-piarahamonina misokatra, raha oharina amin'ny nVidia.
Ny vahaolana tsara indrindra sy ny refy fanerena manohitra ny bikan'ny vokatra AMD / ATI dia tsy ny fividianana azy ireo, na sonia na ronono ...
Nampihatra an'io fanerena io aho nanomboka tamin'ny 2005 sy ny paska masina.
Saingy manana ny fanohananako ara-moraly ianao…. 😉
Azo antoka, tsy mividy azy ireo ianao ary avy eo inona? Tsy miraharaha izy ireo, tsy 10% amin'ny tsenan'ny varotra ataon'izy ireo izahay ..., hivarotra izy ireo ary hihena ny fahaizan'ny mpamily mahay, satria afaka hiteny izy ireo fa tsy misy olona mampiasa linux mividy ny vokatray
Marina fa ny GNU / Linux dia tsy manana ny isan'ny isan-jaton'ny mpampiasa hangataka amin'ny mpamokatra araka ny voalazanao, fa afaka manao roa. Tsy mividy sary ATI koa aho, saingy mbola hisoratra anarana amin'ilay fangatahana satria fantatro fa misy mpampiasa hafa mila mpamily tsara kokoa. Ahoana no hahafantaran'ny AMD fa mampiasa Nvidia aho? Ary heveriko ihany koa fa tsara kokoa foana ny tsy fahitana ireo safidy, satria amin'izany fomba izany dia hamela fahatsapana tsara kokoa ho an'ireo izay manana ireo sary ireo, manapa-kevitra ny hifindra any Linux.
tomi dia hoy izy:
Manohana ny fangatahana aho manana radeon hd 4670 tafapetraka ao amin'ny ubuntu 12.04 satria tsy afaka mampiasa ny mpamily ao amin'ny ubuntu 12.10
Mamaly an'i Tom
Mitovy ihany isika, io olana io dia manakana ahy tsy hanova ny distro amin'ny iray hafa toa ny fedora na archlinux. Soa ihany fa Ubuntu 12.04 no LST.
Raha tsy hamoaka ny kaody loharanon'ny mpamiliny izy ireo, farafaharatsiny mba hataon'izy ireo tsara sy omena tohana.
Saingy tsy rariny ihany ny tsy fiheveran'ny AMD ny mpanjifany.
€ quiman dia hoy izy:
Tsy aleo ve manao fanangonana sonia nomerika?
Amin'ny tranokala an-tserasera?
Sa tsy maintsy antontan-taratasy ara-batana?
Valio ny € quiman
Tsara izany saingy tsy fantatro ny tranokala azo itokisana, fantatrao ve?
scaamanho dia hoy izy:
Mamaly an'i scaamanho
Vao nandefa azy aho ary mbola tsy nivoaka. Raha mivoaka indroa izy dia miala tsiny amin'ireo admin noho ny olana amin'ny famongorana azy
Na izany na tsy izany, sonia 150 toa vitsy ihany amiko. Heveriko fa tsy maintsy ho isa misolo tena kokoa izany.
Betsaka ... inona no tianao holazaina amin'ny fiantohana?
Fa ny tahirin-kevitra dia tsy navoaka na ny mailaka dia ampiasaina amin'ny SPAM?
Raha izany ... dia azonao atao ny manangana endrika google iray izay tena mora atao ao amin'ny Google Drive.
Alefaso mailaka aho dia ho hitanay ny fomba fanaovanay azy :), raha afaka manampy ahy ianao dia hanampy be anao.
jereo kely ity, mety tsy maninona tb.
Mety hiasa ve ny.org.org? https://www.change.org/es
Na izany na tsy izany dia manana ny soniako ianao. Na dia ny tsara aza dia ny famoahana ireo pitsopitsony.
€ quimant dia hoy izy:
Ity misy horonantsary momba ny fomba famoronana endrika:
Valio ny quimant €
Aza mieritreritra fa ny GNU / Linux ihany no iharan'ity toe-javatra ity, tsia tompoko ... mahery ny sary AMD ... (io rehefa miasa matetika ireo mpamily), fa ny olana (ary na inona na inona ny rafitra fikirakirana resahina) , dia loza ny mpamily azy, ao amin'ny OSX ohatra dia mijaly noho ny tsy fahombiazany izy ireo ka nisafidy sary Nvidia izy ireo, ao amin'ny Windows izay heverina fa hiasa tsy misy kilema ny AMD dia manana hadalana. Ohatra, ao amin'ny kaonty Hackintosh AMD dia ny aretin'andoha lehibe indrindra any.
Ho ahy, manana ny fanohanako amin'ny lafiny sonia ianao, fa ho ahy ny karatra sary AMD dia tsy safidy intsony amin'ny Linux sy OSX.
Ampiako ny rohy voalaza, mba hahafahanao manao sonia mivantana ny fanangonan-tsonia:
Nvidia no ampiasaiko fa manohana azy ireo ihany aho
Manatevin-daharana ny antony ihany koa aho. Satria napetrak'izy ireo ny pejy mba hanangonana sonia, lazao eto amin'ny bilaogy izy ary ny olon-drehetra fantatro fa forum miresaka momba ny GNU / Linux izay manomboka ny hetsika ka manampy bebe kokoa izy ireo, fa tsara raha toa ka misy an'i Nvidia koa, ireo mpamily ireo dia somary misy olana na dia tsy dia be loatra aza ny eritreritro toa ny ATI.
Izaho manokana dia tiako i Nvidia, tsy tiako ny AMD / ATI
Vonona ... efa miako amin'ny bilaogiko sy google + aho
Aza adino ny manavao ny vavahady fidirana ifotony, mba hidiran'ny tsirairay ao amin'ilay rohy ary tsy hizarazara ny ezaka.
Vonona ... ny fanavaozana ny tsirairay avy dia efa vita ary notondraka tamin'ny fomba rehetra
Ao amin'ny Facebook sy Twitter ihany koa
Ary amin'ny bilaogy:
Efa nanao sonia aho ary ny vadiko koa 😉 Enga anie ka hahomby ity fangatahana ity.
Efa nanohy nanao sonia aho, nomen'izy ireo ahy ny solosaina finday taona vitsivitsy lasa izay, ary manana ATI izy, misy ampahany amin'ireo olana mahazatra amin'ireo mpamily ireo, ankehitriny dia hita fa ilay HD3470 izay ilay laptop-ko manana, miaraka amin'ireto mpamily ireto, Tsy ajanona intsony izy ireo, mahamenatra tokoa isika.
Misoratra anarana ho an'ity aho.
Tsy hividy AMD na ATI intsony aho.
drinor dia hoy izy:
Mamaly an'i drinor
Nosoniavina. Manana milina birao roa (4570 sy 5770) sy kahie aho (4250) ary mahantra amin'ny Linux ny fampisehoana, hany ka amin'ny birao 4250 dia mety hihoatra ny 5770, farafaharatsiny mba ho ahy ...
Izaho koa dia manana andian-tsarimihetsika radeon hd 3000 ary manaiky aho, antenaiko fa afaka manome ny sonia xD 15 taona aho.
Manararaotra maneho hevitra aho, vao avy namoaka kinova vaovao nvidia izy ireo (ampahany amin'ny fisaorana an'i ubuntu sy valva) izay mila fanatsarana ny linux, iza amin'ireo mpamily no tsara kokoa? ny an'ny ati sa ny an'ny nvidia?
Munrha dia hoy izy:
Manantena aho fa ny valva sy orinasa hafa manatevin-daharana ny antony dia hanome an'i Amd fanerena hanatsara ny mpamily azy ireo, toa ny nataon'i Nvidia tamin'ireo mpamily farany azy ireo, tsy maintsy jerentsika raha mahafeno ny fampisehoana ampanantenain'i Nvidia izy ireo, izay avo lavitra noho ny mpamily teo aloha, tsy tadidiko ny soatoavina fa zavatra tokony hampientanentana azy.
Mamaly an'i Munrha
Raha mandeha ny raharaha araka ny asehon'ity vaovao ity ... Mieritreritra aho fa tsy hametraka ny tanany betsaka amin'ireo mpamily Linux izy ireo. Homeny laharam-pahamehana ianao amin'izay toerana amidiny indrindra.
Marina ve ny vaovao?
Tamin'ity herinandro ity aho dia namaky tantaram-baovao iray avy amin'ny AMD milaza fa hifantoka mandritra ny herintaona amin'ny mpamily izy ireo fa tsy amin'ny famoronana modely vaovao.
Taiza no namakianao azy dia tiako hovakiana, farafaharatsiny mba hanana fanantenana 🙂
Ahoana ny fomba hamoronana tonelina SSH eo amin'ny mpizara Linux sy ny mpanjifa Windows